Ndiani Martin Vrijland?
Martin Vrijland ndiani uye nei anonyora zvinyorwa? Martin Vrijland mutori venhau, munyori uye muongorori iye zvino ane webhusaiti yakakura kwazvo muNetherlands kune chaiye anotsvaga chokwadi. Muna 2012 akarega basa rake sevatengesi vevatengesi vepasi rese uye akasarudza kuita ruzha rwakasiyana. Kana […]
Maonero matsva uye akajeka!
Ndiani anoyeuka mifananidzo kubva mufirimu ye trilogy 'The Matrix' kubva ku1999 umo chero munhu upi zvake anenge achipfuura anogona kuchinja kamwe kamwe kuti ave 'mujeri'? Kubvira pazuva randakatanga kunyora, mhanho huru yakatanga kundiita dema. Izvi zvinoratidzika mumapepu ayo ose anozarura mapuranga pamusoro pangu uye [...]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 9 July 2020	• 17 Comments
Dhimoni June 21, Willem Engel, Mordechay Krispijn, Jeroen Pols, kupenga kwehutachiona uye chii chichaitika zvinotevera?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 23 June 2020	• 17 Comments
Nezuro ndakatsanangura muchidimbu kuratidzwa kweSvondo 21 June munaThe Hague. Iwe unogona kunge wakamboona mifananidzo pano neapo uye pamwe wakazoona kuti iyo yose yaive "yehunyanzvi" yakarongeka. Iwe waona zvakare kuti vanoita bongozozo vakabuda mumatare emapurisa. Zvinogona kupokana kuti […]
Kushanya kwakazara: 4.286.145